यी चीजहरूले पाठेघर क्यान्सरको जोखिम बढाउन सक्छ ? सावधान रहनुहोस् ! « Image Khabar
काठमाडौं । उपचार विधि जटिल र महँगो हुने क्यान्सर रोगका कारण हरेक वर्ष सयौं महिलाहरुले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । महिलाहरुले कफी र अण्डाको प्रयोग कम गर्न सके पाठेघर क्यान्सरको जोखिम घटाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
इरान युनिभर्सिटी अफ मेडिकल साइन्सेज, इम्पेरियल कलेज लन्डन र निपिसिङ विश्वविद्यालय, क्यानडाका अनुसन्धानकर्ताहरूको अध्ययन अनुसार कफी र अण्डाले गम्भीर पाठेघर क्यान्सरको जोखिम बढाउने काम गर्छ ।
पाठेघरको क्यान्सरलाई ध्यानमा राखेर गरिएको यो अध्ययन जर्नल अफ ओभेरियन रिसर्चमा प्रकाशित भएको छ । अध्ययनमा भनिएको छ, ‘महिलामा पाठेघरको क्यान्सर सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ । तिनीहरूको पहिचान र उपचार गर्नाले पाठेघरको क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ ।’
अध्ययनमा पाठेघरको क्यान्सर बढ्नुमा धेरै कारक तत्वहरु जिम्मेवार बताईएको छ । केहि महिलाहरुमा यो वंशाणु हुनसक्छ । सोधकर्ताका अनुसार बिभिन्न एस्ट्रोजन हर्मौन थेरापीले पनि पाठेघर क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ । कुनै महिला आफ्नो जीवन चक्रको कारणबाट पनि जोखिममा परिरहेका छन् । मोटोपन र खानपानबाट पनि यस्तो समस्या आउँछ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार कफी, अण्डा, अल्कोहल जस्ता खानेकुराले पाठेघर क्यान्सर गराउँछ । दैनिक ५ कप भन्दा बढि कफी पिउनु खतरा मानिन्छ ।
एक अनुसन्धानको अनुसार अण्डा नखाने महिलाको तुलनामा धेरै अण्डा खाने महिलाहरुलाई पाठेघर क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । यी मध्ये केहि अनुसन्धानकर्ताहरुले भनेका छन् की अण्डामा स्याचुरेटेड फ्याट कम हुनाले थोरै मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
महिलामा सबभन्दा बढी स्तन क्यान्सर र दोस्रोमा पाठेघर क्यान्सर हुन्छ । एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा प्रति वर्ष पाँच लाख महिला पाठेघरको क्यान्सरबाट पीडित हुन्छन्, तीमध्ये करीब दुई लाखको मृत्यु हुन्छ । तर, नेपालमा प्रति वर्ष कति महिलालाई यो रोग लाग्छ, कतिको मृत्यु हुन्छ भन्ने तथ्यांक छैन् ।